नेकपामा कसले के जिम्मेवारी पाए ? (सूचीसहित) | Nagarik News - Nepal Republic Media
नेकपामा कसले के जिम्मेवारी पाए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं– पार्टी एकताको एक वर्ष नाघेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विभिन्न विभागको नेतृत्व टुंग्याएको छ । शुक्रबार (आज) बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले ३१ विभाग र एक प्रतिष्ठानको नेतृत्व टुंग्याएको हो।
त्यस्तै ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले सहइञ्चार्ज पनि टुंग्याएको छ। पूर्वमाओवादी समूहले पाएको विभागमा प्राय जसले जुन मन्त्रालय सम्हालेका त्यहि विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ। पूर्वएमालेमा भने केहिले मन्त्रीले मात्रै सम्बन्धित विभागको जिममेवारी पाएका छन्।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ १६:१३ शुक्रबार